China Antique Small ikhandlela Metal Lantern ifektri abakhiqizi | Izindiza Ezindizayo
Antique Amakhandlela Encane Metal Lantern
MOQ: 300 Ucezu
Imodeli Cha: FS191244
Umkhiqizo: I-Flying Sparks Crafts
Ezenziwe Ngesandla: 100%
Khokha Imigomo: Inkokhelo ye-T / T noma idiphozi engu-30%, ibhalansi engu-70% ngokuqhathaniswa nekhophi ye-BL
Imininingwane Yokuletha: kungakapheli izinsuku ezingama-50-55 ngemuva kokuqinisekisa i-oda
Izibani zensimbi yamakhandlela asendulo zilungele ukudla kwamakhandlela ngenxa yobuciko, isiko nokwakhiwa kwazo. Ungahlala unothando futhi ufudumele. Impilo ejwayelekile idinga isimo sothando ukukhanyisa impilo. Lantern akuyona nje uhlobo umhlobiso, kodwa futhi uhlobo imizwa yokuphila. Yonke imininingwane empilweni inika amalungu omndeni umoya ohlukile kusuka kuwe futhi akhombisa impilo engavamile yasekhaya. Isitayela esijwayelekile singama ukuhlolwa kwesikhathi. Kuyindlela eguquguqukayo yasekhaya kanye nokuzikhethela kokuqala kwamaqembu omshado. Isitayela esijwayelekile, ubuhle bonke. Ezenziwe ngesandla, yonke imininingwane yenziwe ngokucophelela ngabaqambi, futhi ingumkhiqizo ofanele ukuqala ngawo. Ukuhlanganiswa okulula, vumela impilo yakho yasekhaya ibe nezinketho eziningi nokuzijabulisa.
Umhlobiso wesibambo ulula futhi ulula. Ngaphandle komhlobiso omningi kakhulu, ukushiya imigqa eyinkimbinkimbi, nokulungiswa kokuma okulula, okuguquguqukayo futhi okulula, kufaneleke kakhulu kuwo womabili amakamelo anamuhla nawamakilasi amasha. Usayizi omaphakathi. Ifanele izitolo zekhofi, imigoqo, izingadi, kuvulandi, njll. Ilungele ukuhlobisa ideskithophu noma ilenga umhlobiso othambile. Kunomqondo wokuklama, okwenza impilo icace futhi ibe mnandi. Akunandaba noma ngabe ibekwa kuphi, kungokuhlangenwe nakho okufudumele kwempilo. Isitayela sokudala, bonisa impilo. Impahla yasekhaya ye-Retro, ukuthungwa kwesitayela nobuso bobuso obuthathu, lapho ukukhanya kwamakhandlela kushaya othini lwezibani oluguquguqukayo, kuyashesha futhi kuyathakazelisa, kwakha isimo sothando nesifudumele sempilo elula yansuku zonke. Izinto zobuciko bensimbi ziyathandwa, ukwakheka okuyize kuhle futhi kuyaphana, futhi zonke izinto zinobungani bemvelo futhi azinabo ubuthi.
Amakhona agobile, ayindilinga futhi abushelelezi, afakwe ngesandla, angalimazi izandla, ukuphepha. I-chassis izinzile, amandla alinganisiwe, aqinile futhi azinzile, akulula ukuwa. I-lantern ipendwe ngokushisa okuphezulu nokwelashwa kwe-anti-rust, akulula ukugqwala futhi ihlala isikhathi eside. Welding Smooth, ukumelana nokushisa, icwecwe futhi elula, ukuthandana kakhulu.
Isiphathi sensimbi yamakhandlela i-antique ilungele idina lokukhanya kwamakhandlela ngamasiko nobuciko bayo. Inganikeza abantu isimo sothando esizuzisa abathandi. Umsebenzi oyinhloko wayo ukuhlala kwezothando nokufudumala.
Igama lomkhiqizo Outdoor Antique Small ikhandlela Metal Lantern
Umbala Okumnyama, iGolide, okuluhlaza okotshani noma okwenziwe ngezifiso
Ukusetshenziswa Ukuhlobisa Ikhaya
Ukuthumela Izimpahla Zasolwandle
Ubuchwepheshe Ezenziwe Ngesandla
Usayizi 15 * 15 * 41CM / noma ngezifiso
Ukupakisha Ukupakisha Okuphephile
Kulayishwa iPort I-Xiamen, eChina
Ukudweba → Isikhunta → Ukwenza okokusebenza → Ukulungiselela izesekeli → ukuwasha → Ukupholisha → Ukususa ukugqwala kanye ne-galvanization → Isifutho nopende → Ukuqedela okungaphezulu → Ukuhlangana → Ukuhlolwa kwekhwalithi → Ukupakisha
Sine umnyango wethu design. Abagcini nje ngokusiza abathengi bavikele imibono yabo, kepha baveze umqondo omusha omusha okhonjiswe embukisweni ngamunye wezohwebo.
Sikholelwa ukuthi ukuba nekhono lokuklama kubalulekile ukusiza amaklayenti andise imakethe. Sithanda ukucabanga ndawonye futhi sisebenzisane namakhasimende.
Langaphambilini New Design Metal ikhandlela Umnikazi Lantern Ukuze Ikhaya Ukuhlobisa
Olandelayo: Metal Square Lantern
Amakhandlela Asendlini Amakhandlela
Lantern ikhandlela Umnikazi
Izibani ezinkulu zangaphandle
New Design Metal ikhandlela Umnikazi Lantern Ikhaya ...
Indoor Outdoor Rustic metal ikhandlela iSiphepho La ...
Creative yensimbi ekhaya umhlobiso amakhandlela black ...